Izinhlanzi zezinhlanzi kuhhavini
Ukudla nokuphuza, Ukupheka
Izinhlanzi zidliwa kanjani kuhhavini? Sijwayele ukuthi i-shish kebab kufanele yenziwe ngokudla. Ngokuvamile kusuka ku-ngulube noma iwundlu. Ezimweni ezimbi kakhulu - kusukela enkukhu. Pheka phezu kwamalahle, ngokushiya ngokukhethekile kule ndawo endaweni ethile, kude nomuzi omkhulu. Kodwa i-shish kebab evela ezinhlanzini ezihhavini ayikho ngaphansi kwe-shish kebab evela enyameni, futhi ngezinye izikhathi ivela ngisho ne-tastier neyomthetho. Yebo, isimo sezulu asikwazi ukuphazamisa izinhlelo.
Izinhlanzi zidliwa kanjani kuhhavini?
Enye yezinketho eziningi i-shish kebab evela emahlathini abomvu.
Izithako zokukhonza okulodwa: usawoti, i- pepper powder, i-oli (umnqumo, izipuni eziyi-5), i-anyanisi isaladi anyanisi (amakhulu, ama-2 ama-pcs.), Ijusi lemonti elisha (20 g noma isipuni 1), i-parsley eqoshiwe (20 Gr.), Izinhlanzi ezibomvu (izibopho, 300-350 gr.)
Sika izinhlanzi (izibopho ngaphandle kwamathambo nesikhumba) ezingxenyeni ezithile, cishe ezilingana nobubanzi be-bulb, bese usika anyanisi emasongweni amakhulu. Sifaka konke lokhu izitsha ezijulile, engeza ibhotela, ijusi kalamula, pepper omhlophe, usawoti kanye nokuxuba ngobumnene. Vala bese ushiya ukuhamba ngezinyawo amahora amathathu kuya kwangu-4.
Inhlanzi ingafakwa emthonjeni wezinhlanzi, mhlawumbe i-cherry, izinkuni (kulokhu izinhlanzi zizovela ngenhlanhla, engaqondakali, iphunga). Ama-skewers agcoba ngamanzi noma ujusi kalamula futhi, ukushintshanisa, uchungechunge izingcezu zezinhlanzi nama-anyanisi amasongo. Simboza ishidi lokubhaka nge-foil, faka i-shish kebab bese uyibeka kuhhavini eliphefumulelwe. Ukushisa kwe-baking kungaba ngu-200 degrees. Inhlanzi ilungiswa masinyane, ngakho-ke isiteji esingamaminithi angu-20 kuhhavini sanele. Ungabeki isikhathi eside, kungenjalo inhlanzi izolahlekelwa ijusi layo. Uqedile i-shish kebab efafazwe ngamakhambi aqoshiwe.
Enye indlela yokulungisa isidlo kusuka ezinhlanzi kuhhavini. Izinhlamvu ze-fillet (300-350 gr.), IMayonnaise (100-120 gr.), I-anyanisi (1 anyanisi esikhulu), isinaphi (15g omisiwe noma i-7g elungile), iwayini elomile (okungcono elimhlophe, 50-60 gr. ), I-Pepper white (umhlabathi, isipuni se-1/2) nosawoti (ukunambitha) oxutshwe esitsheni esijulile bese ufaka emakhazeni okugezela amahora ambalwa. Ungayishiya ebusuku. Iphekwe ngendlela efanayo ngenhla. I-hot shish kebab efafazwe ngamakhemikhali aqoshiwe futhi yakhonza njengesidlo esihlukile. Ukuhlanganiswa ngokuphelele nemifino kanye nama-saladi yemifino.
Zama ukupheka i- steak kusukela ezinhlathini kuhhavini. Isibonelo, kusuka ku-saumoni noma i-salmon. Ilungele ngokuphelele le njongo. Ungathatha noma yiluphi olunye uhlobo lwezinhlanzi, kodwa kuyadingeka ukuthi le nhlanzi i-oily. Izithako zomsebenzi owodwa: i-steak, ushizi ogayiwe (mhlawumbe i-Parmesan, kodwa futhi enye (25-30 g.)), IBhitter (ama-gramu angu-50, isigamu se-greasing i-tray baking), isigamu sesaladi lesaladi, i-parsley (amahlumela amaningana) I-lemon (1/6), usawoti kanye nomswakama omhlophe.
I-steak ihlanzwa futhi ifakwe ephepheni eliphambili lokugcoba. Solim kanye pepper. Fafaza ijusi lemon. Sika u-anyanisi (kanye nama-semicircle) futhi usakaze esiteshini esivela ngenhla. Fafaza ushizi ogayiwe bese uthumela kuhhavini imizuzu engu-15-20, ungasaphinde. Ukushisa okukhulu kunama-degrees angu-200. Fafaza ngamakhambi ashisayo. Njengendwangu ehlangothini, amazambane kanye nemifino kungcono kakhulu.
Mhlawumbe, ngaphezulu kuzothanda enye indlela yokupheka i-steak evela enhlanzi. Isidlo saseKamchatka singathiwa sizwe. Oh kukhona nje ukwazi umuzwa inhlanzi! Azikho izinyathelo eziqondile ezonikezwa. Nika ithuba lokubhukuda umcabango wakho kanye nokuthandayo.
Isiqeshana se-steak se-marinate: usawoti, ufafaze i-soy sauce nejusi lika-lemon, engeza amafutha (umnqumo). Izinongo - ngokuqonda kwakho. Geza yonke i-marinade bese ushiya ihora.
Ngalesi sikhathi, sihlanza amazambane, anyanisi namatamatisi. I-pan ihlanganiswe ne-foil eboshwe emibili futhi ilayishwe kuyo ngokunqunyiwe ibe yimibuthano yemifino: amazambane, anyanisi, utamatisi. Bese kulandela ungqimba lwezinhlanzi ezifakwe emathinini, okuphezulu okunye okulendlala yemifino, okufana nayo ngaphansi kwayo. "Fihla" nge-basil, i-dill ne-parsley eqoshiwe. Solim. Hlanganisa emaphethelweni we-foil bese uyithumela kuhhavini. Vala isilwane sonke isidlo akudingekile, ngoba imifino ayinikezi ukunambitheka kwayo kuphela, kodwa futhi ivikela ngokushisa okungeziwe "okungeziwe". Bhaka imizuzu engu-10-15 (kuhhavini elushisayo, Yebo) ngokushisa kwama-degrees angu-190.
Izitsha zokudoba kuhhavini ziphekwe masinyane, zinamanzi, anamakha futhi afaneleke ngokuphelele kulabo abazimisele "ukuhlala" ekudleni.
I-beetroot edlayo: zokupheka nezici zokupheka
Zeppelins. Iresiphi yokupheka
Ukupheka kanjani isidlo sezinkukhu esimnandi? Ukupheka nezincomo
Amalekhi. Ukupheka kwezitsha ezingavamile kusuka emifino evamile
Ukuhlobisa kwetafula lezinhlanzi: i-sazan ibhaka kuhhavini
Vasectomy - yini le nqubo?
Yiziphi imithi ukucinana kwemigudu yokuphefumula?
Yiziphi Museum kuqala wavula uPeter Omkhulu ngu? ingcebo Kunstkamery
Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi ezihlukahlukene Moldova. Amagilebhisi Moldova: imithetho ukunakekelwa, izibuyekezo mayelana ibanga
Kuthiwani uma ingane kokuziklinya? zosizo lokuqala
"Petr Veliky" - impi esheshayo engahlomile kakhulu izikhali zenuzi. Nuclear missile impi esheshayo engahlomile kakhulu "Petr Veliky": incazelo
Konke esikwaziyo computer amagciwane!
"Big Samashumi Amabili": umlando kanye imigomo yenhlangano. Yimaphi amazwe afakiwe G20?
Indlela Yokukhetha okugeza - kusukela Omsk eMoscow
Ababili-unhlangothi-diesel: isimiso wokusebenza, idivayisi, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Izinwele zakho umbala Brown? Funda izindlela 5 nendlela yokuba egqamile futhi ezikhangayo